Kitra – «Can 2021»: Niova ny datin’ny lalao fifanintsanana ho an’ny Barea | NewsMada
Kitra – «Can 2021»: Niova ny datin’ny lalao fifanintsanana ho an’ny Barea
Noho ny fiovan’ny daty hanatontosana ny dingana famaranana, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2021”, tanterahina any Kameronina, ny 9 janoary ka hatramin’ny 6 febroary, amin’ny taona ho avy , nisy fanamboarana ihany koa ny fifanintsanana isam-bondrona, ho an’ireo ekipam-pirenena rehetra.
Anisan’ireo voakasik’izany, ny Barea de Madagascar, ho an’ny vondrona “K”. Araka izany, naroso avokoa ireo ambin-dalao rehetra ho an’ny ekipam-pirenena malagasy. Araka ny daty nomen’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf), hotanterahina ny alatsinainy 23 marsa, ho avy izao ny lalao mandroso ho an’ny andro fahatelo, ka handray ny Barea any Abidjan ny Elefantan’i Côte d’Ivoire. Herinandro aorian’io, ny talata 31 marsa no hatao eto Madagasikara ny lalao miverina eo amin’ny ekipa roa tonta, izay tafiditra amin’ny andro fahefatra.
Hotanterahina eo anelanelan’ny 1 ka hatramin’ny 9 jona 2020 kosa ny lalao miverina, hifandonan’i Etiopia sy ny Barea, ka hanafika any Addis-Abeba ny ekipam-pirenena malagasy. Eo anelanelan’ny 31 aogositra ka hatramin’ny 8 septambra indray ny hanaovana ny andro fahenina sady farany, amin’ny fifanintsanana ho an’ity sokajy “K” ity, handray an’i Niger, indray ny Barea de Madagascar.